Amaphutha ajwayelekile Amabhizinisi Enza Lapho Ekhetha Ipulatifomu Yokumaketha Yokumaketha | Martech Zone
A platform yokumaketha yokuzenzekelayo (MAP) yinoma iyiphi isoftware eyenza imisebenzi yokuthengisa. Amapulatifomu ngokuvamile ahlinzeka ngezinto ezishintshayo kuma-imeyili, imithombo yezokuxhumana, i-gen ehamba phambili, i-imeyili eqondile, iziteshi zokukhangisa ezidijithali kanye nabasebenzelana nabo. Amathuluzi ahlinzeka ngemininingwane emaphakathi yokumaketha yolwazi lokumaketha ukuze ukuxhumana kungabhekiswa kusetshenziswa ukwahlukaniswa nokwenza ngezifiso.
Kunenzuzo enkulu ekutshalweni kwemali lapho amapulatifomu wokumaketha ezenzakalelayo esetshenziswa ngendlela efanele futhi evuselelwe ngokuphelele; kodwa-ke, amabhizinisi amaningi enza amaphutha ayisisekelo lapho ekhetha ipulatifomu yebhizinisi labo. Nazi engiqhubeka ukuzibona:
Iphutha 1: I-MAP Ayigcini Ngokukhangiswa Kwe-imeyili Kuphela
Lapho amapulatifomu wokumaketha eqala ukwenziwa, obekugxilwe kakhulu iningi bekuzenzela ukuxhumana kwe-imeyili. I-imeyili yisiteshi esishibhile esineROMI enhle lapho amabhizinisi angalandelela futhi abike ukusebenza kwawo. Kodwa-ke, i-imeyili akuyona ukuphela kwendawo futhi. Ukumaketha kumayelana nokuthumela ikhasimende elifanele umlayezo ofanele ngesikhathi esifanele - futhi ama-MAP anika amandla lokhu.
Isibonelo: Ngisanda kusiza iklayenti ukusebenzisa i-webinar yabo ngokusebenzisa ipulatifomu yabo yokuthengisa ezenzakalelayo. Kusukela ekubhalisweni kwangaphambi komcimbi, ukungena ngosuku lomcimbi, ekulandeleni okwenzekile ngemuva komcimbi - bekuyinqubo ezenzakalelayo kuwo womabili ama-imeyili neziteshi zeposi eziqondile. Ipulatifomu lokumaketha nge-imeyili lilodwa nje lalingeke lisisize ukufeza izinhloso zethu.
Iphutha 2: I-MAP ayihambelani nezinhloso zokumaketha ezibanzi
Eminyakeni yami yesipiliyoni ngisebenza eduze namakhasimende, iklayenti ngalinye lalinemicabango ekuthandeni kwepulatifomu. Imvamisa, othatha izinqumo ezingeni le-C uncike kakhulu ezindlekweni zepulatifomu hhayi okunye. Futhi lapho sicwaninga isitaki sabo sobuchwepheshe bokumaketha, sabona lapho amapulatifomu angasetshenziswa khona - noma okubi kakhulu - angasetshenziswa nhlobo.
Into yokuqala okufanele ibuzwe njalo lapho ukhetha i-MAP yile:
Yini imigomo yakho yokumaketha ezinyangeni ezi-3?
Yini imigomo yakho yokumaketha ezinyangeni ezi-12?
Yini imigomo yakho yokumaketha ezinyangeni ezi-24?
Ukuzenzekelayo kokumaketha akulona igama le-buzz elihle futhi akuyona inhlamvu yesiliva. Kuyithuluzi lokukusiza ekufezeni izinhloso zakho zokumaketha. Ngakho-ke, hlala ubuza ukuthi yini okudingeka ukuyifeza futhi usethe i-MAP yakho ukuze ihambisane ngqo nezinhloso zakho zokumaketha futhi ulinganise izinkomba zakho zokusebenza eziyinhloko (ama-KPIs).
Isibonelo: Iklayenti le-e-commerce lifuna ukukhuphula imali ngeziteshi ze-imeyili ngoba yilezi ziteshi kuphela ibhizinisi elisetshenziswayo njengamanje futhi zine-database enkulu kakhulu. Bangase bangadingi ukuzenzakalela… umhlinzeki wesevisi ye-imeyili (i-ESP) kuhlanganiswe nochwepheshe wokumaketha we-imeyili onolwazi angakwazi ukufeza yonke imiphumela. Yini iphuzu lokuchitha ngaphezu kwezikhathi ze-5 isabelomali ukusebenzisa i-MAP wenza into efanayo?
Iphutha 3: Izindleko Zokusebenzisa ze-MAP azithathwa kancane
Lwazi kangakanani iqembu lakho? Ithalente lingaba yinto ebaluleke kakhulu lapho utshala imali ku-MAP, kepha kuvame ukunganakwa ngamabhizinisi amaningi enza ukukhetha. Ukufeza izinhloso zakho zokumaketha, udinga umuntu okwazi ukuphatha ngokuphelele ipulatifomu futhi enze umkhankaso wakho ngayo.
Ngaphezu kwengxenye yamakhasimende ami akhethe ipulatifomu ngaphandle kwethalente langaphakathi ukuze ayisebenzise. Ngenxa yalokhu, bagcina sebekhokhela inkampani yezentengiso ukuthi iyiphathe. Lezo zindleko zinciphisa ukubuya kotshalo-mali futhi zingaze zenze ukulahleka. Ama-ejensi ajwayelekile ukukusiza ngokuqaliswa kwe-MAP yakho, kepha kuyizindleko eziphakeme kakhulu kumabhizinisi amaningi amancane kuya kwaphakathi ukuwasebenzisa aqhubeke.
Amanye amabhizinisi akhetha ukukhulisa amakhono ethimba labo elingaphakathi. Ngesikhathi senqubo yesabelomali, noma kunjalo, abaningi bayakhohlwa ukuhlela izindleko zokuqeqesha kwisabelomali sabo sokumaketha. Isixazululo ngasinye sidinga amakhono abalulekile; ngakho-ke, izindleko zokuqeqesha ziyahlukahluka. UMarketo, isibonelo, yisisombululo esisebenziseka kalula nezindleko eziyisisekelo zokuqeqesha ezingaba ngu- $ 2000 AUD e-Australia. Ngenye indlela, ukuqeqeshwa kwe-Salesforce Marketing Cloud kukhululekile Inhloko yomzila.
Cabanga izindleko zezimpahla zakho zabantu nokuqeqeshwa kwazo lapho unquma endaweni yesikhulumi.
Iphutha 4: Ukuhlukaniswa kwamakhasimende we-MAP akusetshenziswanga
I-MAP ingahlukanisa amathemba akho namakhasimende nganoma iyiphi indlela oyidinga ngayo. Lokhu akukhona nje kuphela ngezinto zedatha onazo, kepha futhi kubhekiswe kahle lapho ikhasimende lisohambweni lwayo noma kumjikelezo wempilo wokumaketha. Ukuthumela umlayezo ofanele ngesikhathi esifanele kuye ngokuziphatha kwamakhasimende abo kuzokhuphula inani lamakhasimende… ukushayela ukwanda kwe-ROI yakho.
Ngokwengeziwe, abathengisi abaningi be-MAP benza ukuhlolwa kwe-A / B ukwenza ngcono imiphumela yomkhankaso. Lokhu kuzothuthukisa imiphumela yakho yokumaketha… ngokwenza ngcono isikhathi nemiyalezo oyithumela ikhasimende lakho. Ukuqondisa izingxenye zamakhasimende nokuziphatha kwabo, nokuhlukanisa iqembu ngalinye labantu kuzosebenzisa umehluko wendlela yokuziphatha kubo bonke abathengi.
Ukukhetha isisombululo esifanele se-MAP akukaze kube lula futhi ukucatshangelwa kufanele kwenziwe ngaphezu kwezindleko zepulatifomu. Vele, kunezizathu eziningi zokuthi utshalomali lwakho lwe-MAP lungahle lungalethi… kepha okungenani la maphutha amane ajwayelekile azothuthukisa amathuba akho okubona ngokugcwele utshalomali lwakho!
Uma udinga olunye usizo ekukhetheni eyodwa, sicela welule isandla futhi siyajabula ukukusiza.
Tags: ukuziphatha kwamakhasimendei-imeyili ezenzakalelayoukumaketha kwe-imeyili okuzenzakalelayoezenzekelayo zokumaketha umcimbiizinkomba zokusebenza kokhiyeimephuplatform yokumaketha yokuzenzekelayoUkuqeqeshwa Kwezentengisoukumaketha amaselulaRIO